Kim Kardashian: ganacsigiisa cusub wuxuu u keenay laba milyan oo doolar ... in ka yar laba daqiiqo! - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Kim Kardashian: ganacsigiisa cusub wuxuu u keenay laba milyan oo doolar ... in ka yar laba daqiiqo!
Kim Kardashian: ganacsigiisa cusub wuxuu u keenay laba milyan oo doolar ... in ka yar laba daqiiqo!
Waxaan fileynay bilow guul leh, laakiin natiijooyinku way wareersan yihiin. Talaadadii 10 Sebtembar, Kim Kardashian ayaa bilaabay orod noocyadiisa cusub ee dharka magacaabay micnahaa. Asal ahaan, sumadda ayaa ahayd in loogu yeedho Kimono, laakiin mowduucyadu waxay riixeen diva Hollywood dib udhac. sida laga soo xigtay TMZ, dhammaan saamiyadii, si kastaba ha noqotee, waxaa la dhacay wax ka yar boqol sekan, taas oo ah rikoor taariikhi ah xawaaraha iibka, dhamaan magacyada la isku daray.
Faahfaahinta, dhammaan alaabada loo soo bandhigo iibka by Kim Kardashian waa ku guuleystey laba milyan oo dakhli ah in kaliya boqol sekan. Isbarbar dhig ahaan, astaanta dharka labiska Spanx ku dhajiyay lacag dhan afar milyan oo doollar sanadkii ugu horreeyay suuqa. Marka la soo koobo, Kim Kardashian ayaa garwaaqsaday, wax ka yar laba daqiiqo, kalabar macaashka sanadlaha ah ee ugu horeeya ee hogaamiyaha hada jira ee suuqa.
Waxaa ka sii wanaagsan, taraafikada dhijitaalka ah ee laga sameeyay furitaanka goobta Kim Kardashian waxay ahayd mid aad u muhiim ah bilaabida micnahaa waxay ahayd in lagu daahiyo hal saac, dartiisnimada awgeed. Waa in la yiraahdo in kumanaan kun oo badeecadood ay iibisay oo ay qortay Starlet-ka Mareykanka dhammaantood ay heli karaan tirada ugu badan. Alaabada ugu qaalisan ayaa ku yaalliin ka hooseeya 100 dollars. Wejiga soo foodsaaray daweynta, dhammaan alaabooyinka ayaa dib loo buuxinayaa.
Kim Kardashian: ganacsigiisa cusub wuxuu u keenay laba milyan oo doolar ... daqiiqado gudahood!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/kim-kardashian-son-nouveau-business-lui-a-rapporte-deux-millions-de-dollars-en-m-1021719
Amiir Harry wuxuu xirayaa iibka bilyan ee 1 Bilyan halka uu muujinayo xirfadaha gorgortanka ee Bangiga maalgashiga